Kusvirwa kwandakaita paWeekend naFarie muBathroom – Makuhwa.co.zw
Kusvirwa kwandakaita paWeekend naFarie muBathroom
Shamwari yangu akabva andi inviter kumba kwake kuti timbotandara zvedu nefriday yacho. The whole of Friday ndirikubasa takangoswera tichitaura zvinyadzi nekutumirana beche nemboro zvekutoti ndakaswera nezemo risingaite nekuti nyaya dzake dzaitonditotesa beche ndiri muoffice. Ndakati ndachaisa akabva auya kuzonditora kubasa ndokuenda kumba kwake.Takasvika zvedu ndobva anyatsondibikira sadza neliver ndobva azondiisira mvura yekugeza. Ndakapinda zvangu ndokutanga kugeza but ndaiva ndisina kukiya door ndobva apinda mubathroom zvikanzi, “aahhh sorry ndanga ndichida kuona kuti waona sipo yekugezesa here.”
Ndakabva ndatanga kunyara nyara ndichivhara beche nemazamu ne towel rangu iye ndokuramba akanditarisa. Ndobva ndamuti, “aaaahhh Farie buda muno kani wakundipinzisa nechando wakavhura door,” apa ndichinyemwerera ndichimutarisa nekaziso kekuti huya,iye akabva afemerwawo ndobva andiswederera akanditsvoda pahuma akandibata muchiuno. Ipapo muviri wangu wese wakabva wadairira zvinoita munhu uya apindwa nekachando. Ndakabva ndatanga kumuswededzera kure ndichimuudza kuti ndaida kupedzisa kugeza. Muviri wangu wese waiva wakazara shower gel yake yandaishandisa ndobva atanga kundipurizira magaro achitora shower gel iya achiwedzera kundizora kumagaro. Apa ndakabva ndatanga kunzwa kunge beche rangu raifambwa fambwa netumasvosve asi ndikaita sendisina zvandiri kunzwa.
Akabva atanga kundimassager musana nemashoulders negel iya yakazara mumaoko. Akanditendeudza ndokuwedzera kundizora achindibata bata mazamu nedumbu. Handaiziva kuti kunhafiwa mazamu kunonakidza so kana muviri wakatota. Zvainyatsotekenyedza apa achinyatsotenderedza zvigunwe pamunyatso yangu. Apa ndaiva ndakungoita kasound kekuti mmmm nechekure zvangu coz zvaiwedzeresa beche rangu kuvhuta. Muviri wangu wese raiva rangova furo. Apa zvangu ndaingoita sendino ignowa asi beche rangu raiva risisagoni nekuvhuta vhuta. Akazotanga kundidira mvura zvishoma nezvishoma kuti mafuro aya abve achiti paadira mvura otanga kundipurizira zvinyoro nyoro. Furo rapera akabva aswedera padhuze neni ndokutanga kundikissa muhuro achiita seanondinanzva muhuro macho akamira nechekuseri kwangu. Akatanga kundibata mazamu aya achibata ma t!ts angu achiita seanomatswinya apa ndaiva ndakungochemerera zvirikure. Paaindibata mazamhu ndakabva ndasveverera mboro yake yaiva mubhurugwa ndichiibonyora zvishoma nezvishoma apa raiva ranyatsomira kuti ngiii.
Ndakabva ndaswededza magaro angu pamboro yake iye aiva busy pamazamu angu. Akanditendeudza ndokutanga kundikisa pamuromo then i kissed him bek. Mmmm Farie ane malips anonaka wena. Aiita seanorumirira my lower lip ombotanga kutambisa rurimi rwake mumuromo mangu. Ini apa ndaiva ndongomubata magaro nnemusana wake iye maoko akaisa pamatits angu. Akabva aisa muromo wake on one of my boobs, mmmm handisati ndambonzwa muromo munodziya kudaro akomana. Apa manje akatanga kundisveta my tit sekacheche akatsinzinyira tumaziso ini ndakamubata musoro wake ndichinyatsomuswededza kuti anyatsosveta zamu racho. Ipapo akabva adzikisa ruoko rumwe achitekenyedza dumbu rangu ndokutanga kupuruzira pamusoro pebeche rangu which was clean shaven.
Related Topics:Kusvirwa kwandakaita paWeekend
Ndakasvirwa naKevy ndamubata achidongorera mubathroom ndichigeza!
Ndakasvira mukadzi waTsano – Part 1